Python2 Lesson 12 - Khit Minnyo
Python-for-Hackers Python2 Lesson 12
Python2 Lesson 12
by KhitMinnyo on November 10, 2017 in Python-for-Hackers
ဒီနေ့မှာတော့ Python Programming lesson တွေထဲက Error နည်းအောင် လုပ်နည်း၊ Error ရှာဖွေနည်းတွေကို ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။
idle လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် file new လုပ်မနေဘဲ သည်တိုင်းလေးပဲ ရိုက်ထည့်ရအောင်နော်။
>>> name = float(raw_input("Enter any number : "))
Enter any number : hi
name ဆိုပြီး သတ်မှတ်အပြီးမှာ မေးလာတဲ့နေရာမှာ hi လို့ ဖြေပြီး Enter လိုက်ပါတယ်။
အောက်ပါ error တက်လာတာကို မြင်ရပါမယ်။ ကဲ ကြည့်ရအောင်ဗျ။
name = float(raw_input("Enter any number : "))
ValueError: could not convert string to float: hi
foat မှာ hi လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်တာကြောင့် ခုလို error တက်လာတာကို တွေ့ရတာပါ။
Data Types လေးတွေကို အောက်ပါအတိုင်း မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Integer = 1,2,3,4,5,... (int)
Float = 0.1, 0.2, 0.3, ...
String = texts (hi, hello, ....)
ဒါဆို ဒီ ဒေတာပုံစံလေးတွေကို သိလောက်ပြီပေါ့။ ကြည့်ရအောင်ဗျ။
ကျွန်တော်တို့ ခု တက်လာတဲ့ error ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်။ အောက်ဆုံးကြောင်းမှာ error ကို ရှင်းပြထားတယ်။
ကျွန်တော် ဖြည့်လိုက်တဲ့ hi ဆိုတာက string ဖြစ်နေပါတယ်။ Float နဲ့ Data Tpype မတူပါဘူး။ ဒါကြောင့် error ဖြစ်ကို ဖြစ်ခမှာပါ။
အထက်ပါ error ကို ဘယ်လို ရှင်းမလဲ။
ဒါကတော့ လွယ်ပါတယ်။ ကိန်းဂဏန်း ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် error မတက်ဘူးပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း Data Type မှာ စာသားပဲ လက်ခံတဲ့ပုံစံ ပြေင်းရေးပေါ့။ ဒါက ရှင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားရမှာက ခုနလိုပဲ Enter any number : မှာ hi လို့ ကျွန်တော်ဖြည့်ခဲ့သလို အခြားသူတွေလည်း မှားဖြည့်နိုင်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျ။ ဒါမျိုးသိပ်မဖြစ်ရအောင် user ကို အမှန်အတိုင်း ဖြည့်သွင်းနိုင်စေဖို့ ဇောင်းပေးပြီး ရေးတဲ့ပုံစံ ပြောင်းရပါမယ်။
x က ၅ , y က ၀ လို့ သတ်မှတ်လိုက်ပြီး x ကို y နဲ့ စားလိုက်တယ်။ အဖြေမထွက်ဘဲ အောက်ပါ error ရမယ်။
>>> error ရဲ့ အောက်ဆုံးကြောင်းကို ကြည့်ပါ။
ဆိုပြီး တွေ့ရပါမယ်။ ကျောင်းမှာလည်း သင်ခဲ့ဖူးတယ်နော်။ ပိုင်းခြေမှာ သုည ဖြစ်လို့ မရဘူး။ သုညကလွဲရင် ကျန်တာ အကုန် ဖြစ်လို့ရတယ်။ ပိုင်းခြေ သုည ဆိုရင် undefine ပဲ။ ခုလည်း အဲလိုဖြစ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ZeroDivisionError ဆိုတာ သုညနဲ့ စားထားမိလို့ ပြတဲ့ error ပေါ့။
error ရှိတယ်ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်။ အသုံးပြုသူက မှားယွင်းဖြေမိရင် error တော့ ပေါ်မှာပေါ့။ ကောင်းပြီ။ error တွေ့တိုင်း အပေါ်မှာ ဆိုခဲ့သလို စာလုံးတွေနဲ့ ပေါ်နေရင် အသုံးပြုသူက ဘယ်လိုထင်မလဲ။ ကိုယ့်အတွက်လည်း အဆင်မပြေလှဘူး။ ပေါ်လာတဲ့ error ကြီးကို အသုံးပြုသူက ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိဖို့ မလွယ်ဘူး။
ဒီတော့ programmer အနေနဲ့က စဉ်းစားရမှာရှိတယ်။ ဘာစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ ကိုယ်ဖြည့်သွင်းစေချင်တဲ့ ဒေတာပဲဖြည့်သွင်းနိုင်အောင် အသုံးပြုသူကို ဆွဲခေါ်ရမယ်။ နောက်တစ်ချက်က အဲလိုဆွဲခေါ်နေတဲ့ကြားကမှ အသုံးပြုသူက တန်ဖိုးမှားထည့်မိတဲ့အခါ ခုနလို စာတန်းတွေနဲ့ error ပေါ်စေမယ့်အစား ဘာတော့ဖြင့် ဘယ်လိုမှားသွားတယ်ဆိုတဲ့ message မျိုးကိုပဲ ထုတ်ပြနိုင်ရမယ်။ ဒါမှသာ အသုံးပြုသူအနေနဲ့ ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဒီလိုလုပ်ရအောင်။
1. လူတိုင်း မှားနိုင်တယ်
ဒီလိုစာတွေနဲ့ ထုတ်ပြမယ့်အစား ပိုပြီး ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ဖော်ပြရမယ်။
3. ဘက်စုံ ထည့်တွေးမှ အကောင်းဆုံးအခြေအနေကို ရမယ်
စတဲ့ အချက် ၃ချက်ကို အမြဲအခြေခံကြရအောင်။
Try , Except and Else Statement လေးနဲ့ ခုလို အခက်အခဲတွေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားကြမယ်။
error တွေ ဖော်ပြနေတဲ့ idle ကို ပိတ်လိုက်ရအောင်။ idle အသစ်ပြန်ဖွင့်ပြီး သုံးမယ်။
python idle မှာ အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်လိုက်ပါ။
name =float(raw_input("Enteranumber : "))
print "Please, type any number you like, 1,2,3,..... or 0.1, ... , 1.1, ..."
print "OK! Your number is : ", name
enter ၂ချက် ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Enteranumber : ဆိုပြီး မေးလာပါပြီ။ နံပါတ် မရိုက်ဘဲ ခုနလို စာတွေ ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါ။
Enteranumber : kmn
Please, type any number you like, 1,2,3,..... or 0.1, ... , 1.1, ...
နံပါတ်တွေသာ ရိုက်ရမယ်ဆိုပြီး ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ message လေး တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
File>> Save ကနေ Desktop ပေါ်မှာ d15.py ဆိုပြီး Save လိုက်ပါ။ ပြီးရင် terminal ကနေ ပြန် Run ကြည့်ပါဦး။
root@kmn:~/Desktop# python d15.py
Enteranumber : 1 ကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်တာပါ။
OK! Your number is : 1.0
ဆိုပြီး နောက်တစ်လိုင်း ကူးသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်တာက ၁ ပါ။ ခု ၁.၀ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာလို့လဲ???
String = texts (hi, hello, words, ....)
ဆိုပြီး ကျွန်တော် ပြောထားခဲ့ပါတယ်နော်။ ခု float ကို သုံးထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့က ကိန်းပြည့်ထည့်လည်း ဒသမနဲ့ ပေါ်နေမှာပါပဲ။
zero နဲ့ စားမိတဲ့ ဆီ သွားရအောင်။
idle အသစ်တစ်ခု ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ file new ကနေ အသစ်ခေါ်ရိုက်လိုက်ပါတယ်။
print "Hi, you cannot devide with zero. Choose another number...."
print "OK. You're right. Your answer is ....", result
အထက်ပါအတိုင်း run ကြည့်လိုက်ပါ။ အနီရောင်စာတွေနဲ့ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့ error ကို တွေ့ရမယ့်အစား message အနေနဲ့သာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
သုညမဟုတ်ဘဲ အခြားကိန်းတွေနဲ့ စမ်းကြည့်ပါဦး။
y နေရာ ၂ ပြောင်းပြီး run ကြည့်ပါဦး။ အဖြေ ဘာရပါသလဲ။။။
အဖြေ ၂ ပဲ ထွက်လာပါတယ်။ ဘာလို့လဲ။ မှားလား မှန်လား။ မှားရင် ဘယ်လိုပြင်ရင် မှန်မလဲ။
ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တင်ပေးခဲ့ပြီးသမျှ သင်ခန်းစာတွေက ဒါတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်စေဖို့ လမ်းဖွင့်ပေးထားပြီးသား ဖြစ်နေလို့ပါ။
Picking and Shelving
ဒီအကြောင်း မဆွေးနွေးမီပေါ့။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Day15 ဆိုတဲ့ folder အလွတ်လေးတစ်ခု Desktop ပေါ်မှာ လုပ်ထားလိုက်ရအောင်။
ပြီးရင် idle ဖွင့်လိုက်ပါ။ idle >> file>> new ကနေ ဖိုင်သစ် ဖွင့်ပါ။ ပြီးရင်တော့ အောက်ပါ line လေးများကို ရိုက်လိုက်ပါ။
(import cPickle နဲ့ import shelve ဆိုတာတွေကတော့ Picking and Shelving ဆိုတဲ့ import method တွေအတွက် command တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ )
import cPickle , shelve
one = [ "apple", "orange", "mango", "grape" ]
two = [ "fish", "meet", "beef" ]
write = open ('file.dat', 'w')
အထက်ပါ command line လေးတွေကို ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ခုန ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးထားခဲ့တဲ့ Desktop ပေါ်က Day15 ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာ test ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ Save လိုက်ရပါမယ်။ idle ကို ပိတ်စရာမလိုပါ။ ခုန folder အသစ်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးလိုက်တဲ့ test.py ကို တွေ့ရပါမယ်။ တစ်ဖိုင်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကဲ ခုန ရေးထားတဲ့ idle ထဲမှာပဲ RUN လိုက်ရအောင်။
run လိုက်ပေမယ့် ဘာမှ တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ ခုနေ Desktop ပေါ်က folder ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ file.dat ဆိုပြီး နောက်တစ်ဖိုင် တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုနေ့က သင်ခန်းစာ ၂ခု မှတ်မိပါလိမ့်ဦးမယ်။ writefile နဲ့ readfile ပါ။ အဲသည်ပုံစံနဲ့ ခုဖော်ပြတာနဲ့ ဆင်တယ်နော်။ .dat နဲ့ .txt ပဲ ကွာနေတာ။ ဒါဆို ဖိုင်ကို စာပေါ်လာအောင် ဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆိုတာ တွေးမိပြီပေါ့။
ကုဒ်လိုင်းလေးတွေ အောက်မှာ ဆက်ရိုက်ထည့်ရအောင်ပါ။
read = open ('file.dat', 'r')
print readone, "\_n", readtwo
အထက်ပါ လိုင်းတွေကို ခုန ရေးထားတဲ့ idle ဖိုင်ထဲမှာ ဆက်ရေးရပါမယ်။ ခုဆိုရင်တော့ ဒီလိုဖြစ်သွားပါပြီ။
Save ပြီး ပြန် RUN ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျ။
Desktop ပေါ်က folder ထဲမှာရှိတဲ့ file.dat ကို Right-click >> Open with text editor နဲ့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့
ဆိုပြီး တွေ့ရပါပြီ။ ဒါလေးရေးတာများ လို့ မထင်ပါနဲ့ဦး။ :)
ခုန idle ထဲမှာပဲ ထပ်ပြီး ရိုက်လိုက်ရအောင်
shelvefile = shelve.open('newfile.dat')
shelvefile["one"] = ["What", "Who", "Which", "When", "Where", "Why", "How"]
shelvefile["two"] = ["I", "We", "You", "He", "She", "They", "It"]
for key in shelvefile.keys():
print key, "", shelvefile[key]
အထက်ပါ လိုင်းတွေကို ရိုက်ပြီးရင် Save လိုက်ပါ။ RUN ကြည့်လိုက်ပါဦး။
ထပ်မံဖြည့်သွင်းလိုက်တာက shelve ပါ။ ဘာတွေ ထပ်ဖြည့်လိုက်လို့ ဘယ်လိုပေါ်တယ်ဆိုတာလေးကို ဂရုစိုက်မှတ်သားထားပါ။
ခုနေမှာ Desktop ပေါ်က folder ထဲ ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် file.dat , newfile.dat , နဲ့ test.py ဆိုပြီး ဖိုင်သုံးခု တွေ့ရပါပြီ။
Picking and Shelving Module ကို အသုံးပြုပြီး .dat တွေကို ဖန်တီးတာတို့ ဒေတာဖြည့်တာတို့ လုပ်တတ်ပြီထင်ပါတယ်။
ခု ဆွေးနွေးတဲ့ တစ်ခု ကို ပြန်ကြည့်ရင် ခုလို တွေ့ရပါမယ်။
Python2နောက်ဆုံးအပိုင်း ကြည့်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
By KhitMinnyo on November 10, 2017